यस कारण खीईन्छ दाँत, जानी राखौ - ज्ञानविज्ञान
दाँत पनि हाम्रो शरीरको एक महत्वपूर्ण अंगमै पर्छ। दाँत न हुदा कस्तो देखिन्छ होला ? अनुहारमा सुन्दरताको लागि दाँत पनि राम्रो र मिलेको हुन अति आवश्यक छ। दाँतको राम्ररी सरसफाई तथा हेरचाह नगरेको अवस्थामा दाँतमा समस्या देखापर्छ । अन्यथा समयमै उपचार नगरेको खण्डमा पायरिका कारण दाँत तथा गिजामा संक्रमण भई दाँत र्झन थाल्छ ।
कतियको समस्या हुन्छ, दाँतबाट रगत बग्ने । सास गन्हाउने । पाइरियाको कारण पनि यस्तो हुन्छ । दाँतको उचित रेखदेख नगरेमा पाइरियाको संभावना रहन्छ । दाँतले खानेकुरा चपाउँछ, सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । दाँतको साइनो खानेकुरा चपाउनसँग मात्र छैन । यो शरीरको यस्तो अंग हो, जसले सौन्दर्यसँग पनि साइनो राख्छ ।
मुखमा सात सय किसिमका व्याक्टेरिया हुने गर्छ, जसको संख्या करौडोको हाराहारीमा हुने गर्छ । यही व्याक्टेरियाले दाँत तथा मुखको समस्याबाट बचाँउने गर्छ । यदी मुख, दात तथा जिब्रोको सफाई सही तरीकाले नभएको अवस्थामा उक्त व्याक्टेरियाले दात तथा गिजालाई हानी पुर्‍याउने गर्दछ ।
त्यसबाहेक, कलेजोको खराबीका कारण पनि रगतमा लम्लियपन बढ्न थाल्छ । दुषित रक्त अम्लियपनाका कारण दात पायरियाबा टप्रभावित हुने गर्छ ।
पायरिया भएमा सासबाट दुर्गन्ध आउन थाल्छ । गिजा सुुनिन थाल्छ । दात कजोर भई हल्लिन थाल्छ । बढी तातो तथा चिसो पेय पदार्थको सेवनले दात सिरिङ्ग हुन थाल्छ । छुँदा समेत गिजा सुनिन थाल्छ । साथै दुई दाँतको बीच ग्याप रहन थाल्छ ।
पायरियाबाट बच्ने उपाय
Topics #कैल्सियम #दांत #पायरिया #सौन्दर्य
Don't Miss it यस्ता छन्, कपाल बलियो बनाउने केहि घरेलु उपाय
Up Next यसरी हटाउनुहोस्, कपालको चाँया
शरीर को कुन अंग मा कोठी भएको व्यक्ति कस्तो हुन्छन ? रोचक जानकारी
के गर्ने त सफल बन्न ?
दिमागलाई स्वस्थ राख्नका लागि आफूसँग रहेका सामान्य अस्वस्थ व्यवहार पन्छाउनुपर्छ । आफ्नो व्यवहार, भावना र विचार नियन्त्रण गर्न सकियो भने…
कुहिनो र घुडाँमा कालोपन छ ? यसरी हटाउनुस
चिनी र ओलिभ ओइलः चिनीले छालालाई एक्सफोलिएट गर्ने काम गर्छ । ओलिभ ओएलले त्यसलाई मोस्चराइज गर्ने काम गर्छ । बेकिङ…